Fananganana lozisialy - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Ireo tranobe lozisialy dia manondro tranobe manokana amin'ny fitehirizana sy fitaterana lojika. Ny valan-javaboary lozisialy dia manondro toerana iray misy fotodrafitrasam-pitaovana isan-karazany sy karazana orinasam-pitaovana samihafa zaraina afovoany eny amin'ny habakabaka amin'ireo faritra ifantohana ny asa lozisialy ary misy fomba fampifandraisana maro. Izy io koa dia toeram-pivoriana ho an'ny orinasam-pitaovana misy refy sy asa fanompoana isan-karazany.
Mba hanamaivanana ny fitohanan'ny fifamoivoizana an-tanàn-dehibe, mampihena ny tsindry ataon'ny indostria amin'ny tontolo iainana, mitazona ny firaisan'ny indostrialy, mifanaraka amin'ny firoboroboan'ny indostrian'ny lozisialy, mahatsapa ny fizotran'ny entam-barotra, any amin'ny faritra ambanivohitra na ny faritra an-tanan-dehibe sy ambanivohitra akaikin'ny lehibe arterenan'ny fifamoivoizana, vondrona lozisialy marobe miaraka amina mafy fitaterana, fitahirizana, tsena, vaovao ary fitantanana voafaritra ny asany. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana miandalana ireo fotodrafitrasa sy serivisy serivisy isan-karazany, ny fanomezana politikam-pahefana isan-karazany mba hisarihana ivon-toerana lozisialy (fizarana) marobe hivondrona eto ary hahatonga azy ireo hahazo tombony miavaka dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampidirana ny tsena sy ny fahatsapana ny fihenan'ny vidin'ny lojika. fitantanana. Mandritra izany fotoana izany dia nampihena ny voka-dratsy isan-karazany nateraky ny fitsinjarana ivon-toerana fitsinjarana lehibe tao afovoan-tanàna ary nanjary indostria manohana ny toekarena maoderina.
Ao anatin'ny faritra iray, ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny entana fitaterana, fampitaovana ary fizarana, anisan'izany ny fitaterana iraisam-pirenena sy an-toerana, dia tanterahina amin'ny alàlan'ny mpandraharaha isan-karazany (OPERATOR). Ireo mpandraharaha ireo dia mety tompona na mpanofa tranobe sy fotodrafitrasa (trano fanatobiana entana, foibe famongorana, faritra fitehirizana, toerana misy ny birao, toeram-piantsonana sns.) Naorina tao. Mandritra izany fotoana izany, raha te hanaraka ny fitsipiky ny fifaninanana malalaka, ny vohitra mpitatitra entana dia tsy maintsy mamela ireo orinasa rehetra mifandraika akaiky amin'ireo asan'ny orinasa voalaza etsy ambony. Ny tanàna iray mpitatitra entana dia tsy maintsy misy koa ny fotodrafitrasa ho an'ny besinimaro mba hahatratrarana ny asa rehetra voalaza etsy ambony. Raha azo atao dia tokony ampidirina ao koa ny serivisy ho an'ny mpiasa sy ny fitaovan'ny mpampiasa. Mba hamporisihana ny fitaterana entana marobe, ilaina ny manompo vohitra mpitatitra entana amin'ny alàlan'ny fomba fitaterana isan-karazany mety kokoa (tany, lalamby, seranan-dranomasina / lalina, renirano ary rivotra). Ary farany, ilaina ny vohitra fandefasana entana ka tsy maintsy ampiasain'ny rafitra lehibe iray (RUN), na ho an'ny daholobe na tsy miankina.
An'ireo tranobe ho an'ny daholobe ny tranobe lojika. Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana haingana dia aseho amin'ny fomba tokana ireo tranobe lozisialy. Ny valan-javaboary manokana dia mankany amin'ny seranan-tsambo na seranam-piaramanidina, ary ny ivon-toerana fizarana manokana dia mankany amin'ny toerana fizarana isan-karazany, ary mamorona rojolojika mirindra.
Ivotoerana fizarana lojika